Nhau - Mhepo Turbine Gegeratoy yekuvandudza maitiro
Mazuva mashoma apfuura, mubatanidzwa unotungamirwa neJapan maindasitiri hofori Hitachi wakunda kuve muridzi nekushanda kwekodzero kwenzvimbo dzekufambisa magetsi dzeiyo 1.2GW Hornsea One chirongwa, ipurazi remhepo repamusorosoro repasi rose iro riri kushanda parizvino.
Consortium, inonzi Diamond Transmission Partners, yakahwina thenda yakachengetwa naOgegem, weBritish offshore mhepo simba inodzora, uye vakatenga varidzi vezvivakwa zvekutepfenyura kubva kunovandudza Wosch Energy, kusanganisira matatu emahombekombe ekumahombekombe ekumahombekombe uye yekutanga nyika yekumahombekombe inoshanda magetsi. Chiteshi chekubhadhara, uye akawana kodzero yekushanda kwemakore makumi maviri nemashanu.
Hornsea Imwe purazi remhepo yekumahombekombe iri mumvura yeYorkshire, England, iine 50% yezvikamu zveWosch uye Global Infrastructure Partner. Yakazara e174 Nokia Gamesa 7MW mhepo turbines akaiswa.
Kubata uye kuchinjisa nzvimbo dzekufambisa inzira yakasarudzika yemagetsi emhepo ekumhiri kwemakungwa muUK. Kazhinji, mugadziri anovaka zvivakwa zvekutapurirana. Mushure mekunge purojekiti yaiswa mukushanda, iyo inodzora agency Ofgem inoona nezvekugadzirisa uye kuendesa kwevaridzi uye kodzero dzekushanda. Ofgem ane masimba akazara pane ese maitiro uye achaona kuti uyo anotamisa ave nemari inonzwisisika
Zvakanakira iyi modhi kune vanogadzira ndeiyi:
Inobatsira kudzora kufambira mberi kweprojekti;
Munguva yekuchinjisa kwenzvimbo dzeOFTO zvivakwa, hapana chikonzero chekubhadhara nzvimbo dzekufambisa dzekunze kuti dziende kuburikidza nemambure;
Natsiridza huwandu hwesimba rekutaurirana hwezvibvumirano zveprojekti;
Asi pane zvimwewo zvinoipira:
Iye anovandudza anotakura zvese zviri kumberi, zvekuvaka uye zvemari mutengo weOFTO zvivakwa;
Iko kukosha kwekuchinjisa kweOFTO zvivakwa pakupedzisira kunoongororwa neOgegem, saka kune njodzi yekuti zvimwe zvinoshandiswa (senge mari yeprojeki manejimendi, nezvimwewo) hazvigamuchire nekuzivikanwa.